Saron-tava → Akanjo miasa • amboradara solosaina P&M matihanina
Saron-tava fiarovana afaka manampy be izy ireo amin'ny fisorohana ny fihanaky ny areti-mifindra amin'ny rafitry ny taovam-pisefoana. Izy ireo dia fiarovana tsara ho an'ny rafitry ny taovam-pisefoana. Ny saron-tava toy izany, mandrakotra ny orona sy ny vava, manakana ny fidirana amin'ny sangan-javatra manimba, fa koa miaro ny tanana voaloto tsy hikasika ny tarehy. Na izany aza, ny fanaovana saron-tava dia tsy manome antoka ny fiarovana amin'ny aretina.
Ny fampiasana saron-tavy fiarovana dia tokony hiarahana amin'ny fepetra hafa hisorohana ny aretina.
Ny iray amin'ireo fitsipika lehibe indrindra dia ny fanarahana fahadiovana tanana ary rafi-pisefoanaary koa ny fisorohana ny fifandraisana akaiky, dia tsara kokoa ny mitazona halaviran'ny iray metatra iray amin'ny hafa. Amin'ny fampiharana an'ireto fitsipika tsotra ireto dia manampy be loatra amin'ny fisorohana ny virus.
Mizara roa ny mason-koditra fiarovana:
Miankina be dia be amin'ny zavatra nalaina azy ireo. Ny saron-tava ho singa iray amin'ny fitaovam-piasana dia mety ho ampahany amin'ny akora isan'andro amin'ny mpiasa iray. Ireo no tena fahita indrindra amin'ny fivarotam-panafody dia amboarina nonwovens, dia tapaka làlana ary mora apetraka, saingy tsy maintsy averina aorian'ny fampiasana voalohany.
Saron-tava miaro Cotton rongony mainty misy ao amin'ny magazay an-tserasera >>
Tava ny landihazo tena azo ampiharina kokoa izy ireo fa ampy ny fizahana azy ireo amin'ny hafanana hafanana mba hahafahana mampiasa azy ireo indray. Mba hanaovana izany dia ampy hanasana eo amin'ny 60 degre, azonao atao koa ny mamono azy ireo amin'ny alàlan'ny fanetren-tena amin'ny fahefana avo indrindra na mandoro amin'ny rano mangotraka. Koa, ny fanafoanana ny saron-tava miaraka amin'ny fiomanana vita amin'ny alàlan'ny alikaola 70% dia mahomby. Afafazo fotsiny ilay saron-tava amin'ny ranon-javatra dia andraso mandra-pitoniany.
Na dia eo aza ny fihevitra miely momba ny tsy fahazoana fiarovana ny saron-tava dia mendrika homena ny zava-misy fa na dia ny mason-kodim-batana tsy lavorary aza dia afaka mamorona palitao miaro, mifangaro amin'ny vokatry ny halaviran'ny 2 metatra eo amin'ireo fifandraisana interpersonal.
Ahoana ny fanaovana akanjo saron-tava raha ilaina mandritra ny ora maro?
Mampalahelo fa ho an'ny ankamaroantsika, ny manao saron-tava dia somary mandreraka, indrindra mandritra ny ora maromaro isan'andro. Mety hahatsiaro tena sempotra na rendremana ianao avy eo noho ny tsy fahampian'ny oksizenina.
Mba hanamaivanana ny tsy fahatsapana vokatry ny fanaovana saron-tava hatrany, mila mahatsiaro ireo fitsipika tsotra fotsiny ianao. Voalohany indrindra dia mitafy saron-tava afa-tsy raha ilaina izany. Raha tsy mifandray amin'ny olona avy any ivelany isika ary tsy any amin'ny toerana be olona, ​​dia mendrika ny maka azy io, na dia minitra vitsivitsy aza. Ny fiatoana fohy dia ahafahanao miala sasatra sy mitondra oxygenate.
Mendrika ihany koa ny fananana saron-tava vitsivitsy azo ampiasaina indray. Raha ny statistika dia misy olona iray mividy satroka 8-10 (ary mividy azy rehefa reraka), mba hahafahan'izy ireo miova mandritra ny andro sy manasa azy ireo - ampitahaina amin'ny fomba fanaontsika amin'ny atin'akanjo. Raha tsy maintsy eo amin'ny toerana mihidy isika dia mendrika ihany koa ny manokatra ny varavarankely sy miaina fatratra. Hahatsikaritra fahasamihafana amin'ny fahatsapanao hatrany izahay.
Saron-tava miaro ny karazan'akanjo manga sy vava Streetwear hita ao amin'ny magazay an-tserasera >>
Fomba ahoana no ahafahan'ny saron-tava manampy antsika amin'ny fiainana andavan'andro?
Ny saron-tava dia natao hiarovana ny rafitry ny taovam-pisefoana. Na dia eo aza ny fitomboan'ny lazan'ny valan'aretina, dia ilaina ny mijery tsara izay toe-javatra hafa hampiasana antsika amin'ny fiarovana ny fahasalamantsika.
Nandritra ny volana maro dia nahazo vaovao tsy tapaka momba ny haino aman-jery momba ny ankehitriny isika tatitra amin'ny boogamin'izay ahitanao fitomboana fandotoana manokana mandritra ny vanim-potoana fanafana. Ny fitrandrahana mitombo dia mampidi-doza amin'ny agglomerations lehibe miaraka amin'ny fitaterana mahery vaika ary miaraka amin'ny zavamaniry indostrialy.
Ireo mponin'ny tanàn-dehibe lehibe indrindra eto an-tany, ao an-tsaina, dia efa nanao maska ​​endrika tarehy. Ho setriny, amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona sy ny fahavaratra, isika dia iharan'ny karazana fanafody isan-karazany, izay ampiasain'ny mpiaro ny zavamaniry simika na fiarovana amin'ny moka, ny tapa-by ary bibikely hafa. Ary koa, rehefa manao fanadiovana ny trano, indrindra ny fanadiovana ankapobeny miaraka amin'ny fampiasana fitaovana mahery vaika, dia tokony mampiasa saron-tava mba hiarovana ny taovam-pisefoana isika mba tsy hidiran'ny rivotra manimba.
Saron-tava any AziaBielenda tarehyBielenda tarehy saron-tavasaron-tavasaron-tarehy tsarasaron-tava mahafinaritra avy amin'i Rossmannsaron-tranosaron-tarehy vita amin'ny homemadesaron-tava ho an'ny homamiadanasaron-tarehy vita amin'ny homemadesaron-tava mihaonasaron-tava mainty homanasaron-tava vita amin'ny homemadesaron-tava ao an-trano noho ny kapokafanafody an-trano ho an'ny saron-tavahebe facialshebe face masksny fomba fanaovana slime tsy misy lakaoly sy saron-tavainona ny saron-tava no atoroanaoJaponey saron-tavaSaron-tava koreaninaSaron-tava KoreanaFivarotana masika Koreanalomi facialsaron-tavaanti-smog saron-tavasaron-tavasaron-tava ho an'ny lehilahytarehy saron-tavaallegro face maskssaron-tarehy avonagafia babushka tarehy saron-tavaladybug tarehy saron-tavaBielenda tarehy saron-tavasaron-tava ho an'ny lehilahysaron-tava ao an-tranosaron-tarehy vita amin'ny homemadeSaron-tava Hebe facesaron-tava manadioface masks reviewssaron-tava amin'ny tarehyrossmann saron-tavaSephora saron-tavasaron-tava tarehysaron-tava ao anaty sachetsvava saron-tavaziaja tarehy saron-tavamiatrika biby saron-tavasaron-volosaron-tranosaron-tava ao an-tranosaron-tava azoSaron-tava koreaninasaron-tarehy vita amin'ny tarehysaron-tava fitsaboanasaron-tavytarehy saron-tavasaron-tava vita amin'ny homemadesaron-tava maintysaron-volosaron-tava hamandoanasaron-tava hamandoanasaron-tava matotra mahamamosaron-tavy fiarovanany saron-tava manadiosaron-tava manadio tarehysaron-tava mahasalamamanintona saron-tavamason-masosaron-tavasaron-tava an'ny selfiesaron-tavasaron-tava 50 sombinysaron-tava napetrakasaron-tava manalasaron-tava eo amin'ny lehilahymissha tarehyny saron-tava tsara indrindrany saron-tava tsara indrindrasaron-tava voajanaharysaron-tava voajanaharysaron-tava voajanaharysaron-tava hamandoanaakanjo fanaovana dokambarotraborosy ho fampiharana ny saron-tavasaron-tava natolotrysaron-tava matihaninafomba fahandro ho an'ny saron-tava amin'ny homemaderossmann saron-tavarossmann saron-tavaSaron-tava Rosianasephora tarehy saron-tavasephora tarehy saron-tavasaron-tava79saron-tava mora sy tsara tarehysaron-tava mora tarehy